Zuva: Chivabvu 8, 2020
Kovid-19 Katemera Anouya ku Animal Animal Stage
Gurukota rezvemaindasitiri pamwe neTekinoroji, VaMustafa Varank, vakazivisa kuti vaccininant vaccine ichagadzirirwa kurwisa Kovid-19 yasvika padanho rekuyedza mhuka 3 yunivhesiti, uye mumwe wavo akatanga kuyedza. Kutaura kuti nhanho yekiriniki yakauya mushure mekuedzwa [More ...]
Ndege dze İZBAN, ESHOT neMetro dzichava sei vhiki rinouya muİzmir?
Urongwa hwekufambisa paruzhinji rwakagadzirirwa mazuva 9-10 May, apo nguva yekudzidzira ichaitwa mu İzmir. Ruzhinji rwekufambisa basa. Mabhazi eESHOT, achibatana neMetro uye TCDD-İzmir Metropolitan Municipality [More ...]
Iyo Marmaray inoshanda paSvondo Yekudzora?
Marmaray Halkalı-Gebz kune zvitima, machinda vagari kunze yezvinoreva kwasviba kuti kupa chokufambisa kuti Republic of Turkey akaita hafu yeawa zvikamu ari mashoko kubva General Directorate of State Railways; " Ministry of Interior [More ...]
Covid-19 Diagnostic Center inogadzikwa kune OSB Vashandi muBursa
Bursa Chamber of Commerce neindasitiri yaita chidzidzo chakakosha chinobata makambani zvakanyanya nevashandi vavo nekuda kwekubuda kweCoronavirus (COVID-19). Bazi Health, Turkey Institutes of Health Administration (TÜSEB), BCCI uye Bursa Takarongwa [More ...]
Yekutanga Kubhadhara kweMamirioni mashanu nemazana mashanu
Mushure megomarara re coronavirus rakabata nyika yese, Kocaeli Metropolitan Meya Assoc. Dr. NaTahir Büyükakın, pachave ne "hupenyu hwehupenyu" yekutengeserana kwevanhu mukutakura vanhu [More ...]
Izmir vagari pamba pakupera kwevhiki, İZBETON zvikwata zviri pabasa!
Izmir Metropolitan Municipality ichange iri pabasa svondo rino, uko kuchamiswa basa, paine zvikwata 19 zvemabasa asphalt nemabasa ekugadzirisa nzira. Zvakadai seMürselpaşa, Yeşildere, Akçay, Mithatpaşa migwagwa uye Altınyol [More ...]
Ko Metrobus Metro naFerry Vanoshanda muKendendendi muIstanbul?
IMM ichaenderera mberi nekushandira Istanbul nevashandi vangangosvika zviuru gumi nezvitanhatu vhiki ino, uko nguva yekufambisa ichaenderera mberi. Mabhesi, metro neyezvikepe zvekusakura zvichaitirwa mangwanani nemanheru. Kuchenesa guta [More ...]
Ankara Ankaray neMetro Dzinoshanda paSvondo kuManara?
Mukuwirirana nedanho reYanara Governorate Provincial Hygiene Board, iri 19 uye yakaverenwa 09/10, musi wa 2020-07.05.2020 Chivabvu 2020, uko nguva yekuvandudzwa ichaitwa mukati mechikamu chematanho anofanira kutorwa kurwisa coronavirus (Covid-30) denda. [More ...]
Zviuru makumi maviri nezvishanu zvemidziyo zvichapfuura kubva kuAnatolia kuenda kuEurope neMarmaray pagore
Gurukota raKaraismailoğlu: "Makumi maviri nemazana emidziyo pagore vachatakurwa kubva kumaindasitiri eAnatolia uye vanoyambuka rutivi rweEurope kuburikidza neMarmaray. Iko kutumira kwezvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika, izvo zvapera muÇorlu, kuenda kuEurope nyika zvakare kunozoitiswa nechitima. Inopihwa nechitima [More ...]
Bayraktar TB2 SİHA Kusvitswa kuGendarmerie General Command
3 Baykar Defense zvigadzirwa Bayraktar TB2 SİHA yakaunzwa kuGendarmerie General Command. Mutungamiriri weDziviriro Dzekusimudzira İsmail Demir akazivisa kuburitswa kuburikidza neakaundi yake yenhau. Demir anogovana: "3 Bayraktar TB2 kuna Gendarmerie General Command." [More ...]
Mutevedzeri Wenyesheni muPamhepo RamaBhazi mu Şanlıurfa Yakaregwa
Iwo Metropolitan Municipality, uyo unonzi wakakodzera mibairo mizhinji nemabasa ayo akasarudzika mumunda wekufambisa kwevanhu mu lanlıurfa, wabvisa chikumbiro chemuteedzeri muBazi Remabhazi Panguva ino. Inonyaradza veruzhinji kutakura uye vafambi [More ...]
ASELSAN uye KOUSTECH Yakagadzirwa Simba Rakagovera Makadhi eAVV
KOUSTECH yakagadzira "Power Distribution System" nerutsigiro rweinjiniya ASELSAN kuti ishandiswe mumotokari dzinozvitenderedza dzisina kufambiswa. KOUSTECH, Kocaeli University Autonomous Systems Technologies timu, ine zvikwata zvevadzidzi makumi maviri nevaviri. [More ...]
Mask ichagoverwa kweanopfuura makore makumi matanhatu emakore muIzmir, saka tinogona kuitenga kupi?
Izmir Metropolitan Municipality inogovera masiki kune vagari vanopfuura makore makumi matanhatu, vanogona kuenda kumigwagwa kumaawa akatarirwa Ministry of Internal Affairs Svondo rinouya. Kuenderera mberi nekugadzirwa uye kugoverwa kwemaski kufambisa kusvika kwevanhu vekurapa ku tozmir, İzmir Metropolitan [More ...]
Vashandi veTurkey Kuchengeta S-400 Mhepo Yekudzivirira Mhepo Mukudzivirira Systems
Mutungamiri weTurkey Presidency Defense Viwanda. Dr. İsmail Demir, SSB mukuru IweTube Akapindura mibvunzo achishandisa chiteshi chake. Mukutaura kwake uko İsmail Demir akaongorora mamiriro akajairika mumakambani, aive nehanya neS-400 yekudzivirira ndege yekupomha masisitimu. [More ...]
Dhirivhari yePaSS Yakanyanya Kuderera Altitude Mhepo Dziviriro Yakashama Anotanga
Mukati meiyo chiyero chePortable Air Defense Missile System Project (PORSAV), inoitwa pamwe nekubatana neASELSAN neRoketsan, zviitiko zvekuendesa zvakarongwa kutanga munguva pfupi. Dziviriro Indasitiri nemagazini emagazini rimwe zuva pane icho chinhu [More ...]
ASELSAN Inotarisa Kutanga Kuendesa kweKANGAL Yodzivirirwa VIP Mota
ASELSAN, KANGAL Drone-Mini / Micro UAV & RFEYP Kusanganisa / Kupofumadza (Jammer) Sisitimu inodikanwa neGeneral Directorate of Security uye Air Force Command mukati mechikamu chechibvumirano chakasainwa neDziviriro Industry Directorate (SSB) muna 2018, [More ...]
Kambani yeWebhu Yekushandira - Nevhisi
boka redu; Yatanga kukushandira iwe kunge wa2012 uye yabudirira kuita zvirongwa zvakasiyana. Dhizaini yeInternet yevatengi vedu vanokoshesa nekusimudzira masevhisi ese anodiwa nedhijitari zuva nezuva. [More ...]
MuIndia, Chitima Chirova Vashandi Vachifamba Pazvitima ..! Vashandi 16 vakarasikirwa neupenyu
MuIndia, vashandi vanobva kune dzimwe nyika, vaifunga kuti pakanga pasina nguva yekudzoka nekuda kwekudzoka kumba nekuda kwedenda rekoronavirus, vakaita tsaona munzira yekuenda kudzimba kwavo nekufamba munzira dzechitima mushure mebasa. Nguva yekudzoka kuIndia inoenderera, Maharashtra [More ...]
Zvese nezveAdana Chitima Chitima
Adana Chitima Chiteshi ndiyo yechitima chikuru cheTCDD iri muSeyhan mudunhu reAdana. Chiteshi chakaiswa mukushanda muna 1912. Nhasi iri kumusha kuTCDD 6th Regional Directorate uye Adana - Mersin njanji. [More ...]
71 Endemic Plant Species Inowanikwa muTuz Gölü Basin
Gurukota rezvemamiriro ekunze uye Urbanization, VaMurat Kurum, vakacherekedza makumi manomwe nemaviri emhando dzinoparwa dzezvirimwa muSalt Lake Basin munyika. [More ...]
Mamirioni mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemashanu zviuru zvezvimedu zvemapaundi ekutiza fodya akabatwa muİzmir
Mamirioni makumi matatu nemana mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemazana gumi nemazana mazana maviri emafuruji efodya akabatwa mukutsvaga kwakaitwa nezvikwata zve Ministry of Trade Forodha General Directorate mumidziyo ine zvinhu zvinofungidzirwa muAlicia Port of ofzmir. Kuitiswa kwekuputa fodya [More ...]
Intercity Bhazi Makochi Anoda Corona Shield
Nekuda kwematanho eCoronavirus matanho, makambani ebhazi ari kutakura nezvifambiso ane zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvekumiramo akamirira rutsigiro. Pakati pezvikumbiro zvakaendeswa kuna Minister Karaismailoğlu, MTV haina kubhadharwa kubva muzana 50 VAT, uye kushandiswa kweFSM Bridge kubva kuSCT kudzoserwa. [More ...]
Metropolitan Municipality, iyo yaita danho rakakura mukufambisa kwemadhorobha, inosvika pamutsetse wetangi kubva kuChipatara cheguta kuenda ku75 Year District District uye Opera kuburikidza neKumlubel District, nekupa simba kumaraini apera. [More ...]
Yechidiki Art: Vanokunda ye 4th Poster Design kukwikwidza Vaziviswa
Vakahwina mu “Mudiki Art: 4th Poster Design kukwikwidza” yakarongedzwa neUngano yetsika uye Tourism inaziviswa. Mumakwikwi anonzi "Domination-i Milliye", ndakapa mari inosvika zviuru zana nemazana mashanu nemakumi mashanu emirairo yemapaira, mumakumi mana nematatu ekugadzira mifananidzo. [More ...]
Minister Varank: 'Hatisi kuzorega iyo indasitiri yeTurkey irege kuneta'
Industry and Technology, Va Mustafa Varank, pakuti Turkey chine kugadzirwa kwezvivako, "Isu Haazobvumiri kwakaderera ari Turkish indasitiri." akati. Kuona kuti rumutsiriro rwunotarisirwa muindasitiri yezvemotokari kubva pakati paJune, Gurukota Varank akati: [More ...]